Hugh Hefner၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိင်သုတေသနအကယ်ဒမီနှင့်၎င်းတည်ထောင်သူဥက္ကဌ - သင်၏ ဦး နှောက်သည်
Hugh Hefner, လိင်သုတေသနနိုင်ငံတကာအကယ်ဒမီနှင့်၎င်း၏တွေ့ရှိခဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ
Comment: အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆယ်စုနှစ်များအတွက် sexology အလုပ်အကိုင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ကြောင်းခြောသက်သေအထောက်အထား။ ယနေ့တိုင်အောင်, sexologists နေဆဲသစ္စာရှိရှိအဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအစေခံ.
ရစ်ချတ်အစိမ်းရောင်အတွက်အားဖြင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း 27 အောက်တိုဘာလ 2017
ဒါဟာအကျဉ်းသမိုင်းရဲ့စာဖတ်သူများမှထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းယင်းလင့်ခ်များသတိမထားမိဖြစ်နိုင်သည်သူ IASR ၏တရားဝင်ထုတ်ဝေ။
ကျွန်မပထမနှစ်တွင် premedical ကျောင်းသားအခါ 1953 ခုနှစ်တွင်, Hugh Hefner (1926-2017) တစ်ဦးဝတ်လစ်စလစ် Marilyn Monroe featuring, Playboy မဂ္ဂဇင်း၏ပထမဦးဆုံးပြဿနာထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Playboy မီးခိုးရောင်'S အတူခန္ဓာဗေဒငါ၏လေ့လာမှုအဘို့နေရာမှယူခဲ့ပါတယ်။
ငါလိင်သုတေသနနိုင်ငံတကာအကယ်ဒမီတည်သောအခါဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအကြာမှာတော့ကျနော်တို့အခွန်-ကင်းလွတ်ခွင့်အဖြစ်ထည့်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Burton သည်ယောသပ်က, Playboy ဖောင်ဒေးရှင်းမှအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ, ဒီစီစဉ်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ 18, 1973 မိမိရေးသောစာ:
ငါ Playboy ၏ဆုံးမစကားနှင့်အတူပြောပြီ။ သူတို့ဟာလိင်သုတေသနနိုင်ငံတကာအကယ်ဒမီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဒီကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရန်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိရှေ့နေများတဦးတာဝန်ပေးပါပြီ။ ငါအကယ်ဒမီ၏အောင်မြင်မှုကိုဆီသို့ငါတို့အလှူငွေအဖြစ် Playboy ဖောင်ဒေးရှင်းမှမှငွေကောက်ခံအားလုံးကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်။
Burt ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့်ဥပဒေရေးရာအကြံပေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူ့န်ဆောင်မှုများအတွက်ဘာမျှမပေးဆောင်။ နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့အီလီနွိုက်ပြည်နယ်, Playboy ၏အိမ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ Burt ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ, ငါမှာနပေါများအတွက် IASR ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဂျူလီယာ Heiman နှင့်အတူစီစဉ်ပေး Indiana ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Kinsey Institute က။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
သည် Stony Brook, နယူးယော့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ 1975 နှစ်စင်းအစည်းအဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ name ကိုအားကောင်းနိုင်ငံတကာပညာရှင်များလိုအပ်သည်။ အဆိုပါ Playboy Foundation မှအောက်စဖို့, အင်္ဂလန်ကနေယောဟနျသ Bancroft ၏ခရီးသွားများအတွက်ပေးဆောင်။
Playboy လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုသုတေသနနှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါ UCLA ကနေသည် Stony Brook မှယောက်ျားလေးပြုမူ Cross-ကျားငါ၏ရေရှည်လေ့လာမှုလွှဲပြောင်းတဲ့အခါ, ရန်ပုံငွေယာယီနှစ်ခုထိုင်ခုံလုပ်ဖို့အကြားကျဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ Playboy ဖောင်ဒေးရှင်းမှကွာဟချက်ပေါငျးကူး။ ငါသည်လက်ရှိတွင်လိင်တူချစ်သူများ, သူတို့၏ကလေးများအဖြစ်နေထိုင်နေ, မိခင်များရဲ့လေ့လာမှုစတင်တဲ့အခါ, Playboy အမျိုးအနွယ်ကိုပိုက်ဆံပေး။ ပထမဦးဆုံးအဘို့ "လိင်တူချစ်သူမိခင်ကလေးကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကိစ္စတွင်" Playboy မိခင်ရဲ့ရှေ့နေနှင့်သူမ၏ကျွမ်းကျင်သူသက်သေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့။ ကျနော်တို့အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ငါ Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ Playboy Mansion မှာ Hefner နဲ့ငါ့ရေရှည်ဣတ္ကောင်လေးလေ့လာမှုကိုဆှေးနှေးတဲ့အခါသူတစ်ဦးလာဘ်မှတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါယောက်ျားလေးများ၏အုပ်စုသုံးစုဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဣတ္ယောက်ျားလေးများလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေဖြစ်လာ, ဣတ္ယောက်ျားလေးများဖြောင့်ယောက်ျားဖြစ်လာနှင့်ပုလ်ယောက်ျားလေးများသူ့ကိုရန်, ဖြောင့်ယောက်ျားဖြစ်လာ, အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြောင့်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဟာဣတ္ယောက်ျားလေးများဖြစ်ကြသည်။
Hef ရဲ့သာသမီး Christie က, ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစည်းအဝေးတွေမှာပြားပေါ်ရှိကြ၏။ ချစ်စရာကောင်း, အသိဉာဏ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတစ်ခုထောက်ခံသူနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မိန့်ခွန်း၏ပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေးဂတိတော်ကိုသူမက 20 နှစ်ပေါင်း Playboy ရဲ့ CEO အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 100 ဒေါ်လာသန်း Playboy Mansion ၏ Los Angeles မှာတည်နေရာ Charing Cross လမ်းမကြီးပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါအကြီးဆုံးတယောက်ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုညွှန်ကြားရန်လန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ, က Charing Cross ဆေးရုံတွင်တည်ရှိခဲ့ကွောငျး, သံ, ထို့နောက်။
Hugh Hefner ရဲ့အသေသတ်ခြင်းကိုတုန့်ပြန်ရောနှောခဲ့ကြသည်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေစာရေးဆရာများသူ့ကို excoriated ။ Brownmiller (2017) ( "။ Hugh Hefner အကြှနျုပျ၏ရနျသူရှိခဲ့" wrote ဒါပေမယ့်ကုန်မာဆိုင်ပိုင်ရှင် Soh2017) "။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကိုများအတွက် Hugh Hefner ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်" တစ်ဦးထက်ပိုသော modulated တုံ့ပြန်မှုအမျိုးသမီးတစ်ဦးစာရေးဆရာမိတ်ဆွေ Jehan Bokhari နေဖြင့်အီးမေးလ်ငါ့ထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည် wrote: "သူကကောင်းကင်သို့သွားပြီဆိုပါကသူရှိရာချွတ်ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ "
ရစ်ချတ်အစိမ်းရောင်စိတ်ရောဂါကုသမှုပါမောက္ခ, ဂုဏ်ထူးဆောင်, ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့, Los Angeles မြို့,, CA, အတွေ့ရှိခဲ့သမ္မတ, လိင်သုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကယ်ဒမီနှင့်ထူထောင်သူအယ်ဒီတာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းဖြစ်ပါတယ်။
Brownmiller, အက်စ် (2017) ။ Hugh Hefner, ငါ၏ရန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ New York Times ကို. https://www.nytimes.com/2017/09/29/opinion/sunday/hugh-hefner.html.
ကုန်မာဆိုင်ပိုင်ရှင် Soh, ဃ (2017) ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကိုများအတွက် Hugh Hefner ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးနှင့်မေးလ်. https://beta.theglobeandmail.com/opinion/we-should-all-thank-hugh-hefner-for-sexual-liberation/article36433787/?ref=http://www.theglobeandmail.com&.